Ukuhlala kwephupho ku-yacht yethu! - I-Airbnb
Ukuhlala kwephupho ku-yacht yethu!
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Donatella
U-Donatella uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Isikebhe esimangalisayo se-MAIORA 70 flybridge motor yacht "La Voglia Matta" ilinganiselwa ngaphezu kwama-21m ubude futhi inikeza isikhala nokunethezeka ezivakashini. Inikela ngamakhabethe amakhulu ama-3 afaka i-master bedroom e-1, ikamelo lokulala eli-1 eliphindwe kabili kanye nekhabethe lamawele angama-3 agcwele wonke anegumbi lokugezela le-en-suite.
Isikebhe simiswe echwebeni laseFontvielle izinyathelo ezimbalwa ukusuka kumabha, izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, izitolo. Ungafika enkabeni yedolobha ngemizuzu eyi-10 ngezinyawo noma ngebhasi emizuzwini emi-2. Ukapitani ebhodini. Usizo luqinisekisiwe 24h / 24h.
Ukuhlala eLa Voglia Matta kuyinto engasoze yalibaleka. Ukunethezeka, ukuma kwebha ngaphakathi kwechweba nazo zonke izinkonzo ezinikezwayo zizokwenza ukuhlala kwakho kuhluke.
ILa Voglia Matta itholakala ethekwini laseFontvielle. Indawo ethule kodwa ngasikhathi sinye nje izinyathelo ezimbalwa ukusuka ezindaweni zokudlela ezidume kakhulu, izindawo zokucima ukoma, inxanxathela yezitolo kanye nesifunda saseCondamine esibheke ePort Hercule, efinyeleleka ngezinyawo emizuzwini embalwa.
Ukaputeni wethu uhlale etholakala ezivakashini ngesikhathi sokuhlala kwazo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Monaco namaphethelo